British Virgin Islands: Yekutanga Nyaya yeCOVID-19 coronavirus yakashumwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » British Virgin Islands: Yekutanga Nyaya yeCOVID-19 coronavirus yakashumwa
Kuputsa Kufamba Nhau • British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
The British Virgin Islands kesi yekutanga ye COVID-19 coronavirus kubvira pakatanga denda rakataurwa. Mutungamiri weBritish Virgin Islands, Andew A. Fahie, akaburitsa chirevo ichi:
Zuva rakanaka uye chikomborero chaMwari kune vese.
Ndinokutendai nekubatana nesu nhasi kune chakakosha kukura neCoronavirus Disease COVID-19.
Ini ndinoshuvira kuzivisa zviri pamutemo kuti iyo British Virgin Islands nhasi yasimbisa ayo ekutanga (maviri) matenga akaunzwa eCoronavirus Disease COVID-19.
Isu takagamuchira ruzivo mangwanani ano uye isu tanga tichitora nguva yekusimbisa ruzivo rwakakomberedza kesi uye isu taida kuona kuti varwere vaziviswa.
Ini ndichagovana newe ruzivo rwatiinarwo izvozvi, uye nerumwe ruzivo parunongowanikwa.
Mumwe murwere muridzi wemakore makumi mashanu nemashanu ekugara mugari uyo anga afamba nguva pfupi yadarika kubva kuEurope achiratidza zviratidzo zvakapfava. Murwere wechirume akasvika paTortola achibva kuTerrance B. Lettsome Airport munaKurume 56. Nekuda kwenhoroondo yake yekufamba uye zviratidzo, uyu murwere akabata nharembozha yezvekurapa musi waKurume 15 uye akaedzwa musi iwoyo uye ave ari oga kumba kwake kubva ipapo .
Patient B ariwo murume ane makore makumi matatu nemaviri anogara mugari uyo anga afamba nguva pfupi yadarika kubva kuNew York, USA ndokusangana nemunhu akaongororwa hutachiona hweCVV-32 munaKurume 19. Murwere akasvika pachitsuwa munaKurume 8. Aive Akaziviswa munaKurume 10 nezvake achisangana nenyaya yakanaka uye akabata veMedical Hotline pazuva rimwe chetero. Akaedzwa musi waKurume 15 uye akaramba akagara ari oga kumba kwake kubva ipapo.
Mhosva mbiri idzi hadzinei.
Iwo masampuli akaunganidzwa ndokutumirwa kuCaribbean Public Health Agency (CARPHA), uko bvunzo dzevarabhoritari dzakasimbisa mhedzisiro nhasi nhasi munaKurume 25. Varwere vaviri nevadhuze navo vepedyo vakatoudzwa vari pasi pekumanikidzwa kugara kwavo pamba.
Varwere vaviri hutachiona hwaive nehukama-hwakabatana.
Nekudaro, iyo Ministry of Health uye Social Development's epidemiological unit iri kutora matanho akakodzera ekudzivirira njodzi yekupararira kwenzvimbo. Iwe unozonzwa zvimwe kubva kuna Gurukota rezvehutano pane izvozvi matanho.
Ino haisi nguva yekuti chero munhu atye.
Pane kudaro, ngatirambei tichitora matanho ese ekudzivirira kudzivirira hutachiona kuti husapararire.
Dzidzira kutenderera munharaunda. Geza nekuchenesa maoko nguva dzose. Dzivisa kubata kumeso. Vhara muromo wako kana uchikosora. Kana uchinzwa kurwara, usaende kuna chiremba.
Fonera nharembozha yezvekurapa panhamba 852-7650, kuti ugone kuwana kurapwa kwakakodzera uye kuchengetedza vamwe. Kumuka kwakakosha kwazvo.
Isu tese tine basa reumwe neumwe kuti tirege kuregeredza. Tinofanira ikozvino kudzivirira mumwe nemumwe.
Vanhu veVirgin Islands, isu tinofanirwa kuramba tichiita chikamu chako. Mumwe nemumwe wenyu anofanira 'kukuchengetedzai', kuitira kuti vamwe vese vagone kuchengetedzeka.
Ndinoda kudzokorora kuti Hurumende yako yanga iriko uye ichiramba ichinyatso kujeka newe munyaya iyi yekuchengetedza hutano hwako, kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka, uye neyavadiwa vako.
Isu tanga tichipa zvinogara zvichivandudzwa pane ese akakodzera ruzivo.
Tiri kushanda siku nesikati nekuti aya mamiriro emvura uye tinoziva kuti unonetsekana, asi ino ndiyo nguva yekuti isu tese tigadzikane.
Hapana chikonzero chekunzwa kunyara kana kushora chero munhu anoongororwa. Tinofanira kutarisira mumwe nemumwe, nekuti mukuita kudaro tiri kuzvitarisira isu pachedu.
Tinogona uye tichabudirira kukunda matambudziko enguva ino. Mwari wedu anesu uye akationa kuburikidza nematambudziko mazhinji. Ngatirambei tichinamata nekutora matanho ekuzvidzivirira. Ngatirambei takabatana takatarisana nedambudziko, uye tichakunda. Ngatirambei tichiita chikamu chedu kuti zvese zvifambe zvakanaka.
Mwari ngavarambe vakatarisa Vake Vasikana Vasikana vanhu.